भाइरस के हो र भाइरसले कसरी काम गर्छ ? – GoodNews24 – GoodNews24
Home/अन्य/भाइरस के हो र भाइरसले कसरी काम गर्छ ? – GoodNews24
भाइरस एक सुक्ष्म संक्रामक एजेन्ट हो । जसले जीवको जीवित कोषिका भित्र मात्र आफुलाई वृद्धि विकास गर्न सक्छ । भाइरसले जीव र बोटबिरुवादेखि लिएर सूक्ष्मजीवहरूमा,ब्याक्टेरिया र आर्चिया लगायतका सबै प्रकारका जीवहरुलाई संक्रमित गर्न सक्छ।
औसत ब्याक्टेरियम भन्दा १०० गुणा सानो हुन्छ , यति सानो कि तिनीहरू साधारण माइक्रोस्कोपले पनि देखिदैनन्। भाइरसले कुनै जीवको सेलमा आक्रमण गरेर मात्र प्रभाव पार्न सक्छ किनभने तिनीहरू सेलुलर संरचनाहरू होइनन् । तिनीहरू आफैंमा नक्कल गर्न सक्ने क्षमताको अभाव छ, त्यसैले भाइरसहरू प्रोटिनले कभर गरेको डीएनए वा आरएनए जीनको सानो भाग मात्र हुन् । भाइरस अर्को जीवको शरीर भित्र प्रवेश गरेर सोहि जीवमा हावी हुन सक्छन् ।
भाइरसले सबै जीवित वस्तुहरूलाई संक्रमित गर्न सक्छ – बिरूवाहरू र जनावरहरू देखि लिएर सानो भन्दा सानो जीवाणु सम्म। यस कारणले गर्दा, भाइरस जतिबेला पनि मानव जीवनको लागि खतरनाक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। शरीर भित्र प्रवेश गरेर कोषिका संक्रमित नगरेसम्म भाइरसहरु वास्तवमै घातक हुँदैनन्। हावाबाट खोकी र हाच्छ्यु गर्दा , कीराहरूबाट जस्तै लामखुट्टे, वा शरीरको फ्लुइडहरू जस्तै र्याल, रगत वा वीर्यको प्रसारणद्वारा भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ।
एक पटक भाइरसले कोषलाई संक्रमित गरेपछि, यसले आफ्नो होस्टलाइ पूर्ण रूपमा लिने प्रयास गर्दछ। सेलमा प्रवेश गरेको भाइरसले सकेसम्म धेरै प्रतिलिपि भाइरस बनाउँछ र पुनउत्पादित गर्छ। होस्ट सेलले नर्मल सेलले भन्दा धेरै भाइरसयुक्त जेनेटिक सामग्री उत्पादन गर्दछ। समयमै उपचार नभएको खण्डमा , भाइरस नै होस्ट सेलको मृत्युको कारण बन्छ । भाइरस नजिकैको सेलहरूमा पनि फैलिन्छ र फेरी सोहि प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
मानव शरीरमा भाइरस बिरूद्ध केही प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली छन् जसले भाइरस संग लड़छन। सेलमा भाइरस संक्रमण भएपछि सेलले आरएनएमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ र RNA ले गर्ने कार्यमा बाधा आउन सुरु हुन्छ । शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले भाइरसको लागी एन्टिबडीज उत्पादन गरेर भाइरस को पहिचान गर्छ । भाइरसलाई यसको प्रतिलिपि बनाउन असमर्थ बनाउदछ । प्रतिरक्षा प्रणालीले टि-सेलहरू पनि जारी गर्दछ,जसले भाइरसलाई मार्ने कार्य गर्दछ। एन्टिबायोटिकले भाइरसहरूमा कुनै प्रभाव पार्दैन, भाइरस विरुद्ध खोपले प्रतिरक्षा प्रदान गर्दछ।
-भाइरसले कसरी काम गर्छ ?
भाइरसलाई आफ्नो कार्य गर्नको लागि होस्टको आवश्यकता पर्दछ। अर्को जीवित जीवले तिनीहरूलाई काम गर्न आवश्यक सबै चीज प्रदान गर्दछन । भाइरसहरूले होस्ट फेला पार्न कुनै पनि मौका छोड्दैनन । तिनीहरू होस्टको कोषहरू भित्र जान्छन् र यसलाई आफ्नो घर बनाउछन र अरु लाखौ भाइरस पुनरुत्पादन गर्छन । भाइरसले धेरै प्रतिलिपिहरू बनाउन होस्ट सेल कोषहरूको शक्ति प्रयोग गर्दछन ,भाइरसको कारण यति धेरै सेलहरू फ़ुट्छन कि यसका वरिपरिका अन्य सेलहरू संक्रमित हुन्छन्। भाइरसले चाँडै नै धेरै भाइरसहरू बनाउन सक्दछन् – केवल एउटा भाइरस धेरै भाइरसहरूमा परिणत हुन सक्छ र हामीलाई गम्भीर बिरामी समेत बनाउन सक्छ!
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली के हो ?
प्रतिरक्षा प्रणाली कुनै जीव भीत्रको त्यो जैविक प्रक्रियाहरू हो, जसले रोगजनक ट्यूमर कोशिकाहरूलाई पहिले चिनारी गर्छ र त्यसलाई मारेर त्यसबाट हुन् सक्ने रोगहरूबाट रक्षा गर्छ। यो विषाणुहरूदेखि परजीवी भाइरसहरू जस्तै विभिन्न प्रकारको एजेंटको पहिचान गर्नमा सक्षम हुन्छ, साथै यसले एजेंटहरूलाई जीवको स्वस्थ कोशिकाहरू भन्दा अलग पहिचान गर्न सक्छ, ताकि यसले उनिहरूको विरुद्ध प्रतिक्रिया नगर्न सकोस र पूरै प्रणाली सुचारु रूपले कार्य गरि रहोस। रोगहरूको पहिचान गर्नु एउटा जटिल कार्य हो किन भनें रोगयुक्त तत्वहरूको रूपांतरण तिव्र गतिमा हुन्छ, र यिनले स्वयंको अनुकूलन यस प्रकार गर्छन कि प्रतिरक्षा प्रणालीबाट बचेर सफलतापूर्वक आफ्नो पोषकलाई संक्रमित गर्न सकोस। शरीरको प्रतिरक्षा-प्रणालीमा खराबी आउनाले शरीरमा रोग प्रवेश गर्न थाल्छन। प्रतिरक्षा-प्रणालीमा खराबीलाई इम्म्युनोडेफिशेंशी भनिन्छ । इम्म्युनोडेफिशेंशी कुनै आनुवांशिक रोगको कारण हुन सक्छ वा, केही विशेष औषधी वा कुनै संक्रमणले गर्दा हुन सक्छ। यसैको एउटा उदाहरण हो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) जुन एच आई भी भाइरसले गर्दा प्रसारित हुन्छ।
प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सामान्यतया दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ – जन्मजात र अनुकूलन(पछि प्राप्त भएको ) ।
– प्राकृतिक (जन्मजात) प्रतिरक्षा प्रणाली
यस्तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो वाह्य तत्वको कारण प्राप्त भएको नभई स्वाभाविक रूपले शरिरमा अवस्थित हुन्छ। उदाहरणका लागि खोप वाह्य तत्व बाट प्राप्त हुने रक्षक हो । यो विशिष्ट एन्टीजेन्स द्वारा उत्प्रेरित नभएकोले,यसलाई स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली भनिन्छ। यो प्राप्त प्रतिरोधक क्षमताको विपरीत हो। यसलाई प्राकृतिक प्रतिरक्षा पनि भनिन्छ।
-प्राप्त प्रतीक्षा प्रणाली
प्राप्त प्रतिरक्षा एन्टिजेन-विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई जनाउँछ। प्राप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता जन्मजात भन्दा अधिक जटिल छ । एन्टिजेन पहिले प्रक्रिया पुरा गरिएको र राम्रोसंग पहिचान भएको हुनुपर्दछ। एकपटक एन्टिजेन पहिचान गरिसकेपछि, प्राप्त प्रतिरोधात्मक प्रणालीले प्रतिरक्षा कोषहरूको समुह बनाउँदछ जुन विशेष गरी त्यो एन्टिजेनलाई आक्रमण गर्न तयार गरिएको थियो। प्राप्त प्रतिरोधात्मक क्षमताले एक “मेमोरी” पनि समावेश गर्दछ जुन विशिष्ट एन्टिजेनको बिरूद्ध भविष्यको प्रतिक्रियाहरूलाइ बढि प्रभावकारी बनाउँदछ।
प्राप्त प्रतिरक्षा प्रणाली, T र B सेलहरूको प्रतिक्रियाहरू समेट्ने, पछिल्लो विकास हो जसले कुनै पनि एन्टिजेनलाई चिन्नको लागि स्वचालित रूपमा पुनः संयोजित एन्टिजेन रिसेप्टर जीनहरूको उपयोग गर्दछ। प्राप्त प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग लचिलोपन र इम्यूनोलोजिक मेमोरी हुन्छ तर प्रतिक्रियाको लागि यो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणालीको तत्वहरूमा पूर्ण निर्भर हुन्छ।
[irp posts=”3415″] [irp posts=”2573″] [irp posts=”4224″]
[irp posts=”3930″] [irp posts=”2617″] [irp posts=”4080″] [irp posts=”4103″]
भक्तपुरमा मेलम्चीको पानी सुचारु -GoodNews24